Shiinaha Rhombus qaybta koob dheeman ee giraangiraha shaqada cidhifyada ee sagxadaha sagxadaha nadiifinta sagxadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Dheemanka ZL
Cabbirka:5" iyo 7"
Qalab:Qaybaha dheemanka dammaanadda birta+saldhigga birta
Isticmaalka:Qalalan oo qoyan
Bond:Jilicsan, Dhexdhexaad, Adag
Xiriirinta:Dhererka 22.23mm, M14, 5/8" -11
Gariir:30# 50# 70# 100#
Cabbirrada caanka ah ee qaybta rhombusgiraangiraha koobka dheemanwaa 5inch iyo 7inch.Tirada qaybaha waxay ku kala duwan yihiin cabbirro, guud ahaan 8 qaybood oo ah 5inch iyo 12 qaybood oo loogu talagalay 7inch.
Qaybaha qaabka Rhombus oo leh cidhif toosan si loo kordhiyo heerka saarista, halka dusha sare ee qaybaha dheemanka si loo bixiyo gooyn siman iyo nolol dheer.
Jirka koobku wuxuu la yimaadaa daloolo hawo-siineed si uu u bixiyo ururinta siista waxtarka leh iyo si loo ilaaliyo qaybaha qabow.Godadadaasi waxay sidoo kale yareeyaan miisaanka giraangiraha koobka taasoo ka dhigaysa mid lagu shaqayn karo shiimooyinka gacanta lagu qabto.
Dheesha 22.23mm dunta aan dunnida lahayn, dunta 5/8-11 ama seeraha M14 dhamaantood waa la heli karaa.
Jilicsan, dhexdhexaad ah iyo curaarta adag ayaa diyaar u ah qalafsanaanta kala duwan ee sagxadaha shubka ah.Jilicsan dheeraad ah, jilicsan, aad u adag oo aad u adag ayaa la samayn karaa sida codsigu yahay haddii loo baahdo.
Gariirada guud 30#, 50#, 70#, 100#.6#, 16# iyo 200#, 400# ayaa la samayn karaa hadii loo baahdo.
Inta badan waxaa loo isticmaalaa wax shiidiyaasha gacanta lagu qabto ee mashruucyo kala duwan oo kala duwan laga soo bilaabo qaabaynta iyo turxaan bixinta sagxadaha shubka ah, si degdeg ah shiididda shubka ah ama simida.Waxaa loo isticmaali karaa sidiiqalabka saarista daahan la taaban karosidoo kale.
Waxaa loo isticmaali karaa labadaba qalalan iyo qoyan.Marka la isticmaalayo qalalan, Booqday Furimaha Dagaalka gacanta waxa loo baahan yahay in lagu qalabeeyo gogosha iyo nidaamka ururinta boodhka faakuumka.
Z-LION 34C qaybta rhombusgiraangirta dheemanwaxaa loogu talagalay qaybaha qaabka rhombus si degdeg ah u shiidi iyo hawlkarnimo sare leh.Tilmaamaha gaarka ah ee giraangiraha koobkani waa sida soo socota:
Heerka saarista degdega ah, dheeman darajada warshadaha iyo qaabka qaybta rhombus waxay kordhisaa awooda goyntakoob wheel.
Waarta, 8 qaybood oo loogu talagalay 5inch iyo 12 qaybood oo loogu talagalay 7inch, qaybo badan iyo qaybaha dheemanka oogada sare ayaa bixiya nolol dheer.
Qaboojin heer sare ah, godadka hawo-qaadista oo badan si ay u daadiyaan kulaylka wanaagsan, waxay ka hortagtaa waxyeelada qaybaha giraangiraha koobka sababtoo ah kulaylka.
Gariirka la yareeyay, taayir kasta oo koob ah ayaa si xirfadaysan loo alxanayaa oo si firfircooni leh loo miisaaman yahay si loo yareeyo gariirka oo loo bixiyo gooyn siman.
Waxaan haynaa qaabeynta kala duwan ee taayirrada koobka la heli karo si aan u helno waxqabadka ugu fiican iyo dhamaystirka.Qaabka qaybtu waxa uu noqon karaa leydi, rhombus, falaar, iwmMidabka, cabbirka, isku xirka iyo xitaa baakooyinka giraangiraha koobka waa la habeyn karaa.Summada gaarka ah waa la soo dhaweynayaa.
Isticmaalka Qalalan oo qoyan
Dhexroorka 5 "iyo 7"
Qalab Qaybaha dheemanka dammaanadda birta+saldhigga birta
Jilicsan, Dhexdhexaad, Adag
Isku xirka Dhererka 22.23mm, M14, 5/8" -11
Inta badan loo isticmaalo Furimaha Dagaalka ee gacanta lagu hayo sida Hilti, Makita, Bosch ee shiididda gardarada ah iyo isku simida dusha shubka ah ee cidhifyada, geesaha iyo meelaha kale ee aan makiinadaha sagxaddu gaadhi karin.
Hore: 16 Sano Dhoofinta Warshada Shiinaha 4 Tallaabo 3/4 inch Granite/Aalladda Dheemman Marble Resin Resin Bond Allaasive Tools Wershadaha suufka qallalan
Xiga: Xireeyaha suufka Redi Lock ee makiinadaha wax shiida sagxada Husqvarna
PCD koob giraangiraha loogu talagalay ka saarida dahaarka ee shubka f...
Shaagagga koob dheeman ah oo laba saf ah oo shiidi iyo l...
T-qaybta koobka dheemanka giraangiraha gacanta lagu shiido...
Koobka falaarta dheeman shiida giraangiraha gacanta lagu hayo...
Turbo koobka dheemanka giraangiraha shiida iyo heerka...